चार दिनदेखि हवाई सेवा प्रभावित – Online Bussiness Khabar
2021, 14, April, Wednesday
प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ! वैशाख ५ गतेदेखि मेलम्चीको पानी दैनिक १७ करोड लिटर झारिने ! कालीगण्डकी किनारमा बिहानैदेखि स्नान गर्ने भक्तजनको भीड ! अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु नपर्ने !
चार दिनदेखि हवाई सेवा प्रभावित
२०७७ चैत्र १७, मंगलवार ११:३०
काठमाडौं, चैत ।काठमाडौंको आकाशमा बढेको धुलो र धुँवाका कारण शुक्रबारदेखि देशभरको हवाई उडान प्रभावित भएको छ। बाक्लो तुँवालोको कारण विमानलाई चाहिने भिजिबिलिटी कम भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएका दर्जनौं आन्तरिक र बाह्य उडान प्रभावित भएका छन्।
भिजिबिलिटीकै कारण उडान रद्द हुँदा तीन दिनदेखि विमानस्थल पुगिसकेका यात्रुसमेत फर्कन बाध्य छन्। शुक्रबार दिउँसो एकाएक भिजिबिलिटी कम भएपछि झण्डै तीन घन्टा विमानस्थल नै बन्द हुन पुगेको थियो। त्यसयता दर्जनौं आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फका उडान रद्द भइसकेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
सोेमबार मुख्यतया राजधानीसहित पोखरा, भरतपुर र तुम्लिङटार विमानस्थलको हवाई सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ। काठमाडौंस्थित विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सोमबार आन्तरिकतर्फका ३९ उडान रद्द भएका छन्। उक्त उडानहरू काठमाडौं विमानस्थलबाट हुने उडान तालिकामा रहेका थिए।
कार्यालयका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौंबाट दाङ, भोजपुर, रुम्जाटार र ताप्लेजुङका उडान रद्द भएका छन्। त्यस्तै, बुद्ध एयरका पोखरा, भैरहवा र तुम्लिङटारका १५ वटा र यती एयरलाइन्सका पनि सोही गन्तव्यका नौ उडान रद्द भएका छन्।
विहान केही समय उडानमा कुनै अवरोध नरहे पनि दिउँसोतिर एकाएक आकाश धुँवा र धुलोले ढाकिएपछि आइतबारसमेत आन्तरिकतर्फका ४२ उडान रद्द भएका थिए। त्यस्तै, शनिबार पनि ४२ उडान रद्द भएका थिए। पछिल्लो समय आन्तरिकतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक एक सय ५० को हाराहारीमा उडान तथा अवतरण हुँदै आएका थिए।
त्यस्तै, बाह्य मुलुकबाट आउने जहाजले समेत वायुमण्डलीय समस्या भोग्दै आएका छन्। पहिलो दिनदेखि नै आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकबाट आएका जहाज डाइभर्ट हुन थालेकामा उक्त समस्या चौथो दिन पनि जारी देखिएको छ। भिजिबिलिटी नहुँदा सोमबारसमेत हङकङबाट आउने ड्रागन एयरको विमान आउन सकेन।
विमान बंगलादेश भिजिबिलिटी कम भएकै कारण आएन। एयर अरेबियाले पनि नेपालको उडान भरेन। स्रोतका अनुसार सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिजिबिलिटी १८ सयसम्म झरेको छ। विमान बंगलादेशलाई तीन हजार मिटरसम्म भिजिबिलिटी र एयर अरेबियालाई अवतरण गर्न दुई हजार मिटरसम्म भिजिबिलिटी आवश्यक पर्दछ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रितर्फ दैनिक ३६ उडान तथा अवतरण हुँदै आए पनि शुक्रबार १८ मात्रै भएका थिए। त्यसयता ठूला जहाजहरू नेपाल आउँदा समस्यामा छन्। यता आरोहण सिजनको मुखैमा हवाई मौसमले साथ नदिँदा हेलिकप्टर व्यवसायीलाई समेत थप चिन्ता थपिएको छ। कोरोना भाइरसको संकटबाट तंग्रिदै गएको हेलिकप्टर सेवामा समेत धुँवा र धुलो समस्या बनेको छ।
भारतमा भयावह बन्दै कोरोना विभिन्न राज्यहरूमा लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यु घोषणा गर्ने क्रम सुरु
बागलुङ बजारमा ग्यास लिक भएर रेष्टुरेन्टमा आगलागी
सीता के.सी. को तीज गित ‘सैंनाच्यो’ सार्वजनिक
नेपाल विद्यार्थी संघ फलेबास नगरकार्यसमितिको संगठन बिस्तार
रुपन्देहीमा एकजना पुरुषको शव फेला, हत्याको आंशका
वैशाख ५ गतेदेखि मेलम्चीको पानी दैनिक १७ करोड लिटर झारिने
अन्तर्राष्ट्रिय बाग्लुङ समाजले भलिबल संघ बाग्लुङ लाई नगद हस्तान्तरण
धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
दृष्टि विहिन सगरमाथा आहोरण अभियान्तालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको झण्डा हस्तान्तरण